एसीको बजार फस्टायो, पृथ्वीको तापमानसँग के को चिन्ता ? - Internet Khabar
एसीको बजार फस्टायो, पृथ्वीको तापमानसँग के को चिन्ता ?
बेहरोर, भारत, १८ मङ्सिर । गर्मीका महिनाहरुमा रातभर आरामसँग सुत्न नपाएर रतन कुमारलाई पिरलो हुन्थ्यो । जीउभरी खल्खली पसिना आउनु र ओछ्यान नै पसिनाले निथ्रुक्क भिज्नु सामान्य थियो । आज उनको जीवनमा त्यस्तो पीडा छैन । भारतका दशौं लाख मानिसहरु रतनजस्तै कोठालाई चिसो राख्न वातानुकूलित यन्त्र (एयर कर्डिसनिङ–एसी) प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
पोल्यान्डमा जलवायुसम्बन्धी कोप २४ को विश्व सम्मेलन भइरहेको छ । बेहरोरले एसी खरिद गरेको पसलका सञ्चालक राम विलास यादव भन्छन्, उनका ग्राहकलाई विश्वको तापमानभन्दा बढी चिन्ता छ, र त्यो हो गर्मी । “मानिसहरु आफ्ना घरभित्र चिसो बनाउन चाहन्छन्,” यादव भन्छन्, “यसै वर्षमात्र मैले ३०० वटा एसी बेचिसकें ।” उनको भनाइमा हरेक वर्ष एसीको बिक्री व्यापक बढेर १५० प्रतिशत पुगेको छ ।
“वैज्ञानिकहरुले गर्मी बढ्यो भन्दैछन् तर अहिलेलाई मैले आरामसँग सुत्न पाएको छु,” कुमार भन्छन् । रासस
खुशीको खबर ! सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारीको ठूलो अवसर
बलात्कारी बाबाले जेलमा पनि आफूसँगै युवती राख्ने अडान राखेपछि मच्चियो बवाल
राजकुमार ह्यारीकी प्रेमिका मेघन मार्कलका पिता उनलाई अन्माउन उत्साहित